HomeAfaan Oromoo‘Waraanni mootummaan WBO fakkeessee bobbaase guute’
“Waraanni Bilisummaa Oromoo namoota ni jaallata, ni kabajas. Ummannis akka jiraatu barbaada malee hin balleessu,” jedhu ajajaa olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo ta’uu kan himan Obbo Dhugaasaa Bakakkoo.
Hayyu duree itti aanaa Adda Bilisummaa Oromoo kan turan Obbo Dhugaasaan, koree miseensota 71 qabu Waraana Bilisummaa Oromoo bosonaa baasuuf abbootii gadaan hundaa’ee ture keessatti ABO bakka bu’uun qooda fudhataa turan.
Yaaliin sun fashalee, Waraanni Biisummaa Oromoo ABO jalaa bahee akka haaraatti wayita caaseffamu Obbo Dhugaasaa Bakakkoo ajajaa olaanaa Waraanaa kan zooniiwwan maraa ta’an.
“Guyyaa saafaadhaan humni tarkaanfii fudhatu mootummaa yoo ta’e malee kan biraa ta’a jennee hin yaadnu, garuu nu miti” jedhu.
Ajajaa itti aanaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa jeneraal Birhaanuu Juulaa ‘gochi gara jabinaa waraana bosonatti hafeen uummatarratti raawwatamu, kan al-shabaab hin raawwannedha’ jedhanii ture.
“Humna keenya miti, humna Waraana Bilisummaa Oromoo akka hin ta’iin dhibbaa dhibbattin siif mirkaneessa,” jechuun deebisan.
Waraana bosonatti hafe mootummaan ‘shiftaa’ ittiin jedhu kan himatu mootummaa qofa miti.
Jiraattonni godinaalee lixa Oromiyaa yeroo adda addaa BBC’n dubbise ‘rasaasa lamaan du’aa jirra’ jechuun waraana bosona jirus loltoota mootummaas himatu.
“Maqa-balleessiidha malee WBO’n ummata kana foon isaafi lafee isaatiin isaaniif dhaabatee isaaniif du’aa jira” jedhu Obbo Dhugaasaan.
“Waan itti jiru kana wallaalee miti. Du’aa jira. Wareegamaa jira. Kanaaf, ummata kanatti garaa jabaatee ajjeesuuf fedhiis hin qabu.”
Boombii magaalaa Ambootti deggertoota Paartii Badhaadhinaa hiriira bahan irratti dho’een wal qabatee maqaan waraana hidhatee bosonatti hafee ka’uu ilaalchisees Obbo Dhugaasaan, “waan akkasii fashalsiisuun hojii keenya miti” jedhan.
“Kuni harka biraatiin kan hojjetame malee, nu miti” jechuunis akka harka keessaa hin qabne dubbatu.
“Waraanni Bilisummaa Oromoo hanga kamillee yoo aareefi ijaa baafachuun irra jiraate diina adda baasee kophaadhumatti dha’a malee ummata bal’aa keessatti hojii ummata dhiigsuufi madeessu hin hojjetu” jedhan.
Himannaa namoota ugguruu isaanirratti dhiyaatus maqa-balleessii fi olola akka ta’e ibsuun, kana akka hin raawwanes dubbatu.
“Caasaan kenya guutummaatti harka keenya jira”
Ofii caasaan waraana keessanii guutummaatti harka keessan jiraa gaaffii jedhu yoo deebisan, “caasaan keenya guutummaatti harka keenya jira, kan keenya kan ta’e,” jedhu Obbo Dhugaasaan.
“Kan mootummaan WBO fakkeessee ittiin ummata sobee, WBO kana hamaadha ittiin jechisiisu, lamaffaa ammoo ittiin ummata adabuu barbaadu kan bobbaasu guuteera kutaa hunda keessa.”
Lixa Oromiyaatti aanga’oota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun gareen ‘Abbaa Torbee’ jedhamu irra deddeebiin maqaan dhahama.
“Kun harka keenya keessa hin jiru. Kun dargaggootaafi warra aaranii, miidhaa isaanirra ga’un kaka’anii ijaa bahuudhaaf tarkaanfii fudhataniifi warra farroota ummataa ta’an dhabamsiisuurratti kara Dhihaatti waan dalagamaa turedha,” jedhu.
“WBO’n bakka hundumaa ga’uu waan hin dandeenyeef Qeerroodhumti waan wal-gurmeessee hojjechaa jiru nutti fakkaata garuu suduudaan Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hidhata hin qabu” jedhu.
Qabsoon hidhannoo Waraana Bilisummaa Oromoo qabsoo nagaa ABO irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu gaafatamanii, “waan haalli fide akkuma jirutti fudhatanii qabsoo dhiibee dhufe hamaadha, gaariidha osoo hin jedhiin akka haalli fidetti mudaas yoo qabaate qabsoon irra aanuudha malee taa’anii gungumuuniifi yaada hiruun faayidaa hin qabu” jedhan.
‘WBO’n gabbataa jira’
“Qeerroo guyyaa guyyaadhaan dirqamee itti dabalamaa jiruufi qawwee namarraa kufe kaasee loluun humni ‘WBO’ gabbataafi heddummaataa deemaa jira” jedhan.
Jeneraal Biraanuu Juulaa gaaffiifi deebii BBC waliin taasisaniin ajajaa ‘WBO’ Zoonii Lixaa Marroo Dirribaa “ofiin osoo rasaasa tokko hin dhukaasiin warra kaan ficcisiisaa jira” jechuu haalaan qeeqan Obbo Dhugaasaan.
“Akkamitti qawwee tokko osoo hin dhukaasiin bara qabsoo dheeraan kun jiraatama? Jaallattee miti kan dhukaaftu,” jedhu.
“Maqa-balleessiifi tuffiidha” jedhan.
Xumura qabsoo hidhannoo…
“Xumura isaa maalitti beekna” jedhu Obbo Dhugaasaan gaaffii qabsoon hidhannoo yoom xumura argata jedhu yoo deebisan.
“Hamma gaafa inni xumuramuutti ykn hanga lubbuun jirruutti itti fufna. Gaafa nuti dadhabne ammoo dhaloota itti aanuti itti fufa. Garuu guyyaa tokko bilisummaan ni dhuftiidhuma beekna.”
Hayyuu duree itti aanaa fi miseensa gumii shanee Adda Bilisummaa Oromoo kan ta’an Obbo Dhugaasaan, erga waraanatti deebi’anii miseensummaa gumii keessaa haqamuufi haqamuu dhabuu isaanii quba hin qaban.
“Na haquu malu jedheen shakka garuu qunnamtii waanan hin qabneef hin beeku ani” jedhan.
‘Waraanni galuu hin didne’
Bara darbe yeroo WBO bosonaa galchuudhaaf koreen tekinikaa hundaa’e koree sana keessaa tokko kan turan Obbo Dhugaasaan, “faarri isaa akka hin taane bareen gara WBO’tti makame” jedhu.
“Waraanni bosonatti hafe akka warra biyya alaatii galee hoteela keessatti kunuunsa barbaadan argataa turanii miti” kan jedhan Obbo Dhugaasaan, “bosona keessatti osoo dheebotanii, beela’anii, dhukkubsataniifi du’aa jiranii hin gallu hin jenne” jedhu.
“WBO’n qajeeltoodhaan ilaalamee haarsaan ummata isaa bilisa baasuuf kafale beekamtiin kennameefi galuu barbaada malee namni dide hin jiru” jedhu.
Waraanni furmaata waara’aa fiduufi gaaffii Oromoo deebisuuf karaa sirrii ta’ee filanne osoo hin taane dirqamneeti jedhu Obbo Dhugaasaan.